हङकङको सुरक्षा कानुनलाई 'आतंकवादसँग जुझ्न आवश्यक'...... - Bagaicha.com
Rajeshwori Sunuwar १२ जेष्ठ २०७७, सोमबार १७:३९
जोन लीले भने कि यो शहर “हिंसाको छायामा डुबेको छ”। महिनौं शान्त पछि, यस सप्ताहन्तमा बेइजिङ्गको सरकारले हङकङको अनौंठो स्थितिलाई आमूल परिवर्तन गर्ने सुरक्षा कानून प्रस्ताव गरेपछि विरोधको ताजा गति देखियो। विरोधीहरूले यो स्वतन्त्रता र मौन आलोचकहरु सीमित गर्न को लागी प्रत्यक्ष प्रयास हो भन्छन्। ताइवानका राष्ट्रपति तसई ईङ्ग-वेनले हङकङका बासिन्दाहरूलाई सहयोग पुर्‍याउने प्रस्ताव राख्दै बेइजिङ्गलाई प्रयोग नगर्न चेतावनी दिएका छन्। उनले अर्ध स्वायत्त क्षेत्रमा गोली र दमन दिएका छन्। चीन र ताइवान बीच सम्बन्ध पहिले नै तनावपूर्ण छ, किनकि बेइजिङ्गले यस टापुलाई बिच्छेद प्रान्तको रूपमा देखेको छ, तर धेरै ताइवानिहरू एउटा छुट्टै राष्ट्र चाहन्छन्। यसैबीच, बेलायतका गृह सचिवलाई ३,००,००० भन्दा बढी हङकङका बासिन्दाहरूको स्थिति समीक्षा गर्न आग्रह गरिएको छ जसले ब्रिटिश नेश्नल (विदेशी) पासपोर्ट राखेका छन् तर उनीहरूलाई युकेमा बस्न वा काम गर्ने अधिकार छैन। बेलायती सरकारका प्रवक्ताले भने कि चीन र ब्रिटिश संयुक्त घोषणापत्रमा १९९७ मा सहमत भएको हङकङको नियन्त्रण बेलायतबाट बेइजिङ्गमा हस्तान्तरण भएपछि पूर्ण अधिकार र स्वतन्त्रताको पूर्ण सम्मान गर्न चीनको उत्तम समाधान हुनेछ।
पछिल्लो हप्ता के भयो?
चीनको संसद, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) ले ढिलाइ भएको वार्षिक सभाको लागि बिहीबार बिहान यो विधेयक पेश गरेको थियो। चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले भने कि “देशद्रोह, उन्मूलन, विद्रोह र उपद्रोह” लाई प्रतिबन्धित कानूनले “थोरै ढिलाइ नगरी” ल्याउनु पर्छ। आइतबार, हजारौं मानिसहरूले सरकारी चेतावनीहरूलाई इन्कार गरे र विधेयकको विरोधमा शहरको केन्द्र हुँदै परेड गरे। दंगा प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरुलाई अश्रुग्याँस र पानीको तोप दिए जसले कराेना भाइरसको फैलावटबाट बच्न अनुहारमा मास्क लगाएका थिए। त्यहाँ कम्तिमा १८० जना पक्राउ परे। सोमबार एक विज्ञप्तिमा लीले भने कि गत बर्षमा “हङकङमा हिंसा बढेको छ र यसमा विस्फोटक पदार्थ र वास्तविक बन्दुकको संलग्नता रहेको छ”। “शहरमा आतंकवाद बढ्दै गइरहेको छ र राष्ट्रिय सुरक्षालाई हानि पुर्‍याउने गतिविधिहरू जस्तै ‘हङकङको स्वतन्त्रता’ अनियन्त्रित हुँदै गएको छ।” उनले आइतबारको झडपले “एनपीसीले सोचेको निर्णयको आवश्यकता र जरुरीता” देखाएको र कानूनले हङकङको “दीर्घकालीन समृद्धि र स्थिरता” सुनिश्चित गर्ने बतायो। पुलिस कमिश्नर क्रिस टाङले पनि विधेयकको स्वागत गरे र यसो भने कि प्रदर्शनकारीहरुबाट हतियार र विस्फोटक पदार्थले हङकङ “राष्ट्रिय सुरक्षाको जोखिममा रहेको छ र अवस्था बिग्रनबाट रोक्नको लागि प्रभावकारी कदम चाल्नु परेको छ”।
चीनको प्रस्तावित कानूनमा के छ?
हङकङको आधारभूत कानून अन्तर्गत – मिनी संविधानको स्थापना भएदेखि यो १९९७ मा चिनियाँ शासन अन्तर्गत फिर्ता आएको थियो – यसको आफ्नै आन्तरिक मामिला र सुरक्षाको जिम्मेवार छ। तर “मस्यौदा निर्णय” – यो एनपीसीद्वारा अनुमोदन अघि ज्ञात छ – एक लेखमा भन्छ हङकङले “राष्ट्रिय सुरक्षा सुधार गर्नु पर्छ”। यसले थप गर्दछ: “आवश्यक परेको खण्डमा केन्द्रीय जन सरकारको प्रासंगिक राष्ट्रिय सुरक्षा अंगहरूले कानून बमोजिम राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि सान्दर्भिक कर्तव्य पूरा गर्न हङकङमा एजेन्सीहरू स्थापना गर्दछ।” यसको मतलब हङकङमा चीनको सम्भावित आफ्नै कानून प्रवर्तन एजेन्सीहरू हुनसक्दछ। विश्वभरका २०० जना वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरूको समूहले एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी चीनको योजनाको आलोचना गरेको छ। अमेरिकी विदेश सचिव माइक पोम्पीओले पनि योजनाहरूको निन्दा गर्दै शहरको स्वतन्त्रताको लागि “मृत्यु घाउ” भने। बेलायत, अष्ट्रेलिया र क्यानाडाले पनि “गहिरो चिन्ता” व्यक्त गरेका छन्। वीवीसी